UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTHENGA KWI-Masedonia | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LIKAVISA laseMakedoniya, ukuFudukela kwezoQoqosho ngokutyala imali yokuhlala eMakedoni ngotyalo-mali eMakedoni, ukuhlala ngokutyala iMakedoniya, ukuhlala ngokutyala imali p
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eMakedoni kunye neVisa yeGolide
Sibonelela ngeenkonzo zokufudukela kwezoqoqosho eMakedoni:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni
● Ubumi ngokutyala imali eMakedoni
● IVisa yegolide eMakedoni
● Ipasipoti yesibini evela eMakedoni
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni ngokutyala imali nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eMakedoni Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eMakedoni kunye nabarhwebi beepropathi zokuHlala kwiNdawo eMacedonia basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ngamagosa otyalo mali eMakedoniya kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eMakedoni, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eMakedoni, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eMakedoni, ukuhlala kwesibini ngokutyala imali eMakedoni, ukuhlala kubini ngotyalo mali eMakedoni, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala eMakedoni. , Ukuhlala isigxina ngotyalo-mali eMakedoni, ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali eMakedoni, Ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo-mali eMakedoni, Ubume ngokuhlala ngezikim zotyalo eMakedoni, Ubummi ngotyalo-mali eMakedoni, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eMakedoni, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eMakedoni, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eMakedoni, ubumi bobabini ngotyalo-mali eMakedoni, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala eMakedoni, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eMakedoni, iinkqubo zobumi boqoqosho eMakedoni, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eMakedoni, Ubummi ngezikim zotyalo-mali eMakedoni , Ipasipoti yesibini eMakedoni, iinkqubo zokundwendwela yesibini eMakedoni, inkqubo yesibini yokundwendwela eMakedoni, ipasipoti yesibini eMakedoni, ukuhlala kunye nepasipoti yesibini eMakedoni, ipaspoti yesibini yozakuzo eMakedoni, ipasipoti yesibini kutyalo-mali eMakedoni, ipasipoti yesibini yokuba ngabemi eMakedoni, Inkqubo yesibini yokundwendwela eMakedoni, iskim sepasipoti yesibini eMakedoni, i-visa yegolide eMakedoni, ii-visa zegolide eMakedoni, iinkqubo zevisa zegolide eMakedoni, inkqubo yegosa yegolide eMakedoni, yesibini visa igolide eMakedoni, inkqubo yesibini yegosa yegolide eMakedoni, i-visa yegolide emibini eMakedoni, ubumi kunye nevisa yegolide eMakedoni, ukuhlala kunye nevisa yegolide eMakedoni, ubumi begolide begolide eMakedoni, iskim segolide seVisa eMakedoni, izikimu zevisa zegolide eMakedoni.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala eMakedoni ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eMacedonia lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 100,000
Intshayelelo iMacedonia kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda ngakumbi ngeMakedoni
IMakedoni luhlanga oluncinci, olunkudlwana kunommandla waseVermont, emi kuMazantsi mpuma eYurophu, eBalkan ukuba ichane. Ingahoywa rhoqo yimikhosi ebalulekileyo yehlabathi, iMakedoni inabemi abazizigidi nje eziyi-2.07 kodwa amaphenyane anembali etyebileyo neyakudala, njengaleyo yaseGrisi. Abemi baseMakedoniya babandakanya inani elincinci labantu baseRomani, kungenjalo babizwa ngokuba ngamaRomany okanye amaGypsies. AmaRomany ahlala ejongene nocalucalulo kunye nokumelwa gwenxa kwaye uhlala engakulungelanga ukufumana indawo yoluntu. Ngo-1994, urhulumente waseMakedoni walukhumbula ulwimi lwesiRomani ukuba lubhaliswe, kwathi ngo-1996, izikolo ezine zebanga zasikhumbula isiRom ngenxa yenkqubo yazo yemfundo. Ukubonakaliswa kwamaRoma kurhulumente kuphuculwe nge-0.1 yeepesenti ukuya kwi-0.6 yeepesenti ukusuka ngo-2000 ukuya ku-2010. imfundo.
Phantse iipesenti ezili-15 zabemi baseMakedoni, abahlali baseRoma, bahlala bengenamakhaya asemthethweni, okuthetha ukuba abasondeli kulawulo olubalulekileyo, umzekelo, amanzi okanye amandla, okanye isazisi esisemthethweni. Ngaphandle kwesazisi, aba bantu abanakufumana ukhuseleko, isiqinisekiso sentlalo, okanye isitofu. Imibutho ekufutshane, umzekelo, i-Roma SOS ibambisana nemibutho engenzi nzuzo, umzekelo, iHabitat yoLuntu, ukunceda abantu ukuba bafumane inkqubela phambili encinci kwaye baqonde umjikelo wokugunyaziswa.
Ukusukela oko iMacedonia yathatha ukuzimela kwayo ngo-1991, kwabakho ingxoxo neGrisi malunga nokusetyenziswa kwegama elithi Makedoniya. NgoJanuwari 2019, ipalamente yaseMacedonia ivume ukutshintsha igama ukuba libe seMantla eMakedoni kwaye balindele ivoti yepalamente yaseGrisi ukwenza igama libe semthethweni. Olu tshintsho lwamagama luya kulususa uhlanga lusondele ekuthatheni inxaxheba kuMbutho weSivumelwano seNyakatho yeAtlantic (NATO) Njengomntu ovela kwi-NATO, iMakedoni yayiza kuqinisekisa ukhuseleko kunye nezinye izinto zokuphucula ubomi babahlali.
Iipesenti ezintlanu zolutsha lwaseMakedoni azizukuya kwisikolo samabanga aphantsi kwaye iipesenti ezingama-32 azizukuya esikolweni esincedisayo. Indawo yokuhlala ihlala ichaphazela ukuthatha inxaxheba kwabantwana esikolweni. Iipesenti ezilishumi elinesithathu zabantwana abakwi-quintile enethamsanqa abayi kwisikolo samabanga aphantsi, xa kuthelekiswa nokungabikho kwezi meko kwi-quintile ebabazekayo. Ukunyuka kwemingxunya kwizikolo ezincedisayo njengoko iipesenti ezingama-64 zabantwana kwelona quintile linethamsanqa zingayi kubo, xa kuthelekiswa neepesenti ezisi-7 zolutsha kwelona quintile linobunkunkqele. Nokuba kunjalo, inqanaba lokugqitywa kwesikolo samabanga aphantsi liphezulu, ngama-74 eepesenti, ngenqanaba lenkqubela phambili ye-98 yokuhlisa isikolo esincedisayo.
Ngo-1996, iMacedonia yazisa iMfundo eQhubekayo yoNyango (i-CME) eyenza imigaqo-nkqubo yeenkonzo zonyango kunye nokulungiselela iiofisi. Okwangoku, wonke umhlali usondela ekuqwalaselweni okubalulekileyo ngurhulumente. Nangona kunjalo, abo baphila ngokungekho mthethweni ngekhe babe ne-ID enikwa ngurhulumente, ngale ndlela akukho zinkonzo zikarhulumente. Inkqubo-sikhokelo yokhathalelo lonyango ethatha irhafu kubo bonke abantu abasebenza kwaye bahlala eMakedoni, inika simahla kuthintelo, ukubonisa, kunye nokuphilisa ulawulo lweklinikhi. Oku kubandakanya ukulaliswa esibhedlele kunye nengxoxo kunye neenzuzo kunye neengcali. Inkqubo-sikhokelo yeenkonzo zonyango zabucala ihlala ixabisa kakhulu kubahlali abaqhelekileyo, nangona kunjalo, inokunika unyango olungcono okanye olukhawulezayo kunye nezinye iindlela zonyango.
Owona mthombo uphambili wokufa eMacedonia zizifo ezihamba nokujikeleza kwegazi, ezenza ama-57 eepesenti kuko konke ukupasa ngo-2004, i-neoplasm eyingozi, amanxeba / ukwenzakala, usulelo lokuphefumla, kunye nezifo zesakhelo se-endocrine. Ikamva eliqhelekileyo lokuphuma eMakedoni yiminyaka emihlanu ayilingani nelamazwe e-EU kunye nekamva eliqinileyo laseMakedoni malunga neminyaka esibhozo emva kweGrisi. Olu mahluko luvela kwinqanaba eliphezulu losulelo lwentliziyo olubangelwa kukusetyenziswa kwecuba okuphezulu, kunye nolawulo lwexinzelelo lwegazi kunye ne-hypercholesterolemia.
Ukungabikho kwemisebenzi eMakedoni kukwaphula irekhodi, kwehla ukusuka kuma-21.1 epesenti ngoJuni 2018 ukuya kuma-20.8 epesenti ukuya ekupheleni kuka-2018. Ngolungelelwaniso, ukungabikho kwemisebenzi eGrisi kwakuyi-20.20 yeepesenti ngo-Epreli 2018. Umvuzo oqhelekileyo kwinyanga ukuya kwinyanga Umsebenzi waseMacedonia uyi- $ 667.55. Ngelixa iMakedoni isiwa ngasemva kwenani elibalulekileyo leZizwe eziManyeneyo, ilizwe liphucule kule ndawo okoko kuye kwancitshiswa umvuzo wenyanga ukuya kwinyanga eyi- $ 370.96.
Ngo-2015, iipesenti ezingama-21.5 zabahlali baseMakedoni babehlala ngaphantsi komgca wokuhlalisa obeka iMakedoni kwindawo ye-80 kwindawo yeentlanga ezili-139. Iintsapho ezinabantu abahlanu ubuncinci, okanye ama-48.5 epesenti yabantu baseMakedoni, zihlala ziphenjelelwa kukuswela. Nangona kunjalo, iMakedoni ifumene umhlaba ngoqoqosho lwentengiso yayo, kwaye njengoko izinga lokungabikho kwemisebenzi lehlile, latsala inqanaba lokufuna ukusuka kuma-31 epesenti ngo-2011 ukuya kwinqanaba langoku.
Ukutya kunye namanzi kakuhle eMakedoni yamkelekile ngokubanzi, njengoko iipesenti ezi-4 zabantu besilwa nokungondleki kunye neepesenti ezingama-83 zamanzi okusela ngokuthathelwa ingqalelo zijongwa ngokukhuselekileyo. Amagunya oluntu anezona ndawo zininzi zamasimi kunye neefama, azongamela kwaye aziphucule ngoMthetho wamadlelo olawula ukuhambisa umda, amachibi okusela, uphuhliso lweendawo ezingcwele, ezikhululekileyo kutyani kwaye sisiqalo nje eso.
Ngo-2011, iipesenti eziyi-1.8 zolutsha zazingaphantsi komthwalo olungileyo ngokobungakanani bazo, ngelixa iipesenti ezi-4.9 zabantwana zaziphantsi kobude obubalaseleyo kwiminyaka yabo kwaye iipesenti ezili-12.4 zabantwana zazityebe kakhulu. Ingxelo yeSondlo seHlabathi ichaza ukuba iMakedoni idibana neentlobo ezimbini ezibalulekileyo zempilo egulayo yokutyeba kakhulu kunye nokugula. Ngokujikeleze iipesenti ezingama-23 zamanenekazi ahlangabezana neziphumo ezibi zokuqaqamba, okusweleka kweeplatelet ezibomvu emzimbeni. Ngaphandle kwento yokuba le micimbi ikhona, iMakedoni ifumene umhlaba wokunciphisa ukungondleki ngokubanzi ukusuka kwiipesenti ezisi-8 zabemi ukuya kwiipesenti ezi-4.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala kwakhona ngoTyalo mali lwaseMakedoni
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eMakedoni
Emva kwe-3 iminyaka
Emva kweminyaka emi-8 yokuphila
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseMakedoni
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala imali eMakedoni
Utyalomali kushishino ngeziko elisemthethweni kulo naliphi na icandelo
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala iMakedoni
IMakedoni lilizwe elikhula ngokukhawuleza kwaye lisaphuhlayo, emi kuMazantsi mpuma Yurophu. Inommandla oshishino onobuhlobo kunye neerhafu eziphantsi zeshishini kwilizwekazi. Ilizwe likhuphisana nobulungu be-EU, kwaye ipaspoti yaseMakedoni ikwabele wena kunye nosapho lwakho ukufikelela ngaphandle kwe-visa kwindawo yaseSchengen. Inkqubo yokuhlala eMacedonia yotyalo mali idume ngexesha lokuqhubekeka ngokufutshane kwiiveki ezi-3.
Ukufudukela kosapho eMakedoni
Xa imvume yakho yabelwe wena, umyeni wakho kunye nabantwana abaxhomekeke kuwe nabo unokufumana indawo yokuhlala ngokusekelwe kwinkqubo yokudibanisa usapho.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eMakedoniya
Ngokutyala imali kwinkampani yaseMacedonia, uya kufumana imvume yokuhlala kwiiveki ezi-3 zokufaka isicelo sakho. Le mvume mayikucele ukuba uhlale ngokusisigxina emva kokuba uneminyaka emi-3 yokuba ngumhlali wasemthethweni, kunye nokuba ngummi waseMakedoni emva kweminyaka esi-8.
Imfuno yemali yaseMakedoni
Kuya kufuneka utyale ubuncinci be-USD 500,000 kwishishini laseMakedoni nakweliphi na icandelo. Ukongeza, kuya kufuneka uqeshe ubuncinci abemi baseMakedoni abali-10. Imirhumo yokwenza izinto isekwe kwinani kunye nobudala bamalungu osapho, afakiwe kwisicelo sakho.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eMakedoni
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseMakedoni kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha kwelaseMakedoni inikezela abathengi kunye neentsapho zabo eMakedoni ngenkxaso yobumi ngotyalo-mali oluvela eMakedoni, ukuhlala ngokutyala imali eMakedoni kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali eMakedoni okanye iGolden Visa yaseMakedoni okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eMakedoni okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eMakedoni, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IMacedonia okanye i-offshore, izibonelelo zabantu baseMakedoni kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eMakedoni nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseMakedoni:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eMacedonia, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eMacedonia, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe baseMakedoni, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo mali baseMakedoni, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo mali eMakedoniya kunye nefemi yokubonelela ngokufudukela eMakedoni.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eMakedoni ukuya kumazwe angama-37.
IVisa yegolide eMakedoni ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eMakedoni ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eMakedoni ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini okusuka eMakedoni ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eMakedoni.
Iinkqubo zevisa zegolide eMakedoni ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ukusuka eMakedoni ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eMakedoni ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eMakedoni ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseMakedoniya ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu eMacedonia ngombono wokuba abathengi mabafumane imbuyekezo entle kutyalomali eMakedoni, nangaliphi na ixesha, bafuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngenxa yoBume babo ngokuTyala iMakedoni. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eMacedonia abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo eMakedoni, befumana eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabanini bezindlu eMakedoni kunye notyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu eMakedoni.
Kufuneka uyazi-Ukuhlala kwakhona eMakedoni ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona nguGqwetha loTyalo-mali eMakedoniya kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu ngenkxaso yokuhlala kwakho ngempumelelo ngozaliso mali eMakedoni. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala imali eMakedoni zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eMakedoni okanye eMakedoni, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokwenziwa
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni kubaxhasi ngokufumana imvume yokuhlala eMakedoni kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo eMakedoni, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eMakedoniya kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali seMakedoni. Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali eMakedoni kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu okuhlala kwakho nawosapho lwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali eMakedoni sele elungile, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni baseMakedoni.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala imali eMakedoni sivunyiwe, sabelana nawe ngeendaba ezilungileyo kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eMakedoniya kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini eMakedoni:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eMakedoni azinikezelwa kubarhwebi okanye kubasasazi bezixhobo kunye neembumbulu ezisuka okanye ziye eMakedoni.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali zaseMakedoni azinikelwanga ugcino lobuchwephesha eMakedoni okanye ubuchwephesha bezemveliso beenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eMakedoni.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eMakedoni awanikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eMakedoni.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali kwelaseMakedoni ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eMakedoni.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eMakedoni ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eMakedoni.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeMakedoni ayifumaneki kubantu baseMakedoni abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eMakedoni, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali kwelaseMakedoni ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo kwelaseMakedoni ayizizo iinkolo zonqulo kunye noncedo lwabo eMakedoni.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Masedoniya ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eMakedoni.
Indawo yethu yokuhlala abameli eMakedoni ayixhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eMakedoni.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseMakedoni kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eMakedoni ekuvunyelweni kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eMakedoni.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngokuxhasa ngemali eMakedoni kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu eMakedoni.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zaseMakedoni zomthetho, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eMakedoniya zibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga elifanelekileyo lempumelelo eMakedoni.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eMakedoni ukuxhasa abathengi kunye neentsapho zabo eMakedoni.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali eMakedoni kunye nabameli bezomthetho eMakedoni ababonelela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iMakedoni kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eMakedoni kwaye nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eMakedoni
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iMacedonia, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali eMakedoni kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzelayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali eMakedoni
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beMacedonia, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eMakedoni kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa kwelaseMakedoni
Inkqubo yeMvume yokuSebenza eMakedoni
Ukuhlala okwethutyana eMakedoni
Indawo yokuhlala eMakedoni
Izindlu zoonozakuzaku kunye nabameli baseMakedoni
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eMakedoni kunye nezinye iiNkonzo
Sibhale uluhlu lweenkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eMakedoni kwiimfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufuduka nosapho lwakho uye eMakedoni ngokutyala, thina njengeqabane lakho eMakedoniya, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eMakedoni ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo-mali eMakedoniya, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo ze-HR nakwiMakedoni, ongenakufumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseMakedoniya esenza ivenkile yokuma eMakedoni kunye namazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini laseMakedoni ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yethu yomthengi engaphaya kokuhlala ngokutyala imali eMakedoni ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eMakedoni nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eMakedoni okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eMakedoni zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eMakedoni
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eMakedoni uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eMakedoni kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eMakedoni, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eMakedoni
Ngaba ufuna ukubonisana eMakedoni, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eMakedoni Njengesango lokuhlawula okanye lokuhlawula i-fintech eMakedoni okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali EMakedoni ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga esele likho eMakedoni ukuqala kwangoko eMakedoni.
Iinkonzo ze-HR eMakedoni
yethu Inkampani yabasebenzi eMakedoni inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba eMacedonia free.
Iinombolo zeFowuni eyiNene eMakedoni
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eMakedoni kunye amanani abonakalayo eMakedoni Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eMakedoni
Accounting, ngenkuthalo efanelekileyo eMakedoni kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eMakedoni
Ukuseta ishishini eMakedoni
Emva kokuhlala kwakhona ngotyalomali eMakedoni, ukuseta ishishini kwi Masedoniya.
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT eMakedoni
Uyilo lwewebhu eMakedoni
Uphuhliso lwezoQoqosho eMakedoni
Uphuhliso lwewebhu eMakedoni
Uphuhliso lweBlockchain eMakedoni
Uphuhliso losetyenziso eMakedoni
Uphuhliso lweSoftware eMakedoni
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eMakedoni
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni ngokwesisombululo soTyalo-mali eMakedoni kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iMakedoniya, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho eMakedoni inee-arhente zabaphambukeli ezibalaseleyo eMakedoni, sinedumela lokuhambisa awona mava aphezulu okufumana iinkonzo eMakedoni kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseMakedoniya kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eMakedoniya kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana iphepha-mvume lokuhlala eMakedoni, xa imvume yakho yokuhlala eMakedoni ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseMakedoniya ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngokuhlala kwakhona ngabaceli botyalo-mali eMakedoni. Ukuba useMakedoni okanye uceba ukutyelela eMakedoni, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eMakedoni kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseMakedoni. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhubeke okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseMakedoni.
Imibuzo ebuzwa rhoqo -Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eMakedoni
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eMakedoni?
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eMakedoni, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eMakedoniya ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseMakedoni ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eMakedoni, ukuhlala ngenkqubo yotyalo-mali eMakedoni. ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eMakedoni, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eMakedoni, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eMakedoni kunye nokuhlala kakuhle ngabacebisi botyalo mali eMakedoni, abasebenza ngokuhlala kakuhle ngabameli botyalo mali eMakedoni, kunye neefem eMakedoni.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eMakedoni | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eMakedoni | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eMakedoni | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eMakedoni | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali baseMakedoni
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali eMakedoni?
Ubummi ngokutyala imali eMakedoni, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseMakedoniya ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseMakedoni ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eMakedoni, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseMakedoniya exhaswa bubummi beenkonzo zotyalo-mali eMakedoni, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eMakedoni, abona bumi bakhulu ngamagqwetha otyalo-mali eMakedoni kunye nabemi abangcono ngabacebisi botyalo-mali baseMakedoni, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eMakedoni, kunye neefemu zokubonisana nabantu abafudukela eMakedoni.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezingenaxabiso eMakedoni | Abaceli abafudukela kwamanye amazwe eMakedoni | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eMacedonia | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha okungena eMakedoni | Abatyali mali abanokufikeleleka abafudukela eMakedoni | Iifemu zomthetho wofuduko olufikelelekayo eMakedoni
Ithini inkcazo yepaspoti yesibini eMakedoni?
Ipasipoti yesibini eMakedoni, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseMakedoniya ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseMakedoni ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini ukuya eMakedoni, inkqubo yesibini yokundwendwela eMakedoni ixhaswe Iinkonzo zokundwendwela zesibini eMakedoni, ngokusebenzisa amagqwetha esibini epasipoti eMakedoni, awona magqwetha esibini eepasipoti eMakedoni kunye nabacebisi beepaspoti besibini abaseMakedoni, abasebenza kwezona ndawo ziphambili zokundwendwela eMakedoni, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eMakedoni.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini eMakedoni | Iiarhente zokundwendwela zesibini eMakedoni | Amagqwetha esibini epasipoti eMakedoni | Amagqwetha esibini epasipoti eMakedoni | Abacebisi bokundwendwela besibini eMakedoni
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eMakedoni?
I-visa yegolide eMakedoni, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eMakedoniya ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseMakedoni ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, njl njl. Faka isicelo sevisa yegolide eMakedoni, inkqubo yegosa yegolide yaseMakedoniya exhaswa ngu Iinkonzo zevisa zegolide eMakedoni, ngokusebenzisa amagqwetha egosa eVisa egolide eMakedoni, abona bagqwetha bevisa abasemagqabini baseMakedoni kunye nabacebisi begosa abangcono begolide eMakedoni, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eMakedoni, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eMakedoni.
Iinkonzo zevisa zegolide eMakedoni | Iiarhente zevisa zegolide eMakedoni | Amagqwetha egosa egolide eMakedoni | Amagqwetha egosa egolide eMakedoni | Abacebisi begosa begolide baseMakedoni
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eMakedoni?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eMacedonia yi-EUR 100,000.
Ngaba ubonelela ngenkxaso yezomthetho eMakedoni yoBuhlali kwakhona ngotyalo-mali?
Ewe, igqwetha lethu eMakedoni kunye neearhente eMakedoniya zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala eMakedoni.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eMakedoni kuyabiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali eMakedoni kunye nokuhlala kwakhona ngokweemfuno zotyalo mali eMakedoni zezabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela imali yokubonisana ngokuHlala kuTyalo-mali eMakedoniya, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yoBuhlali kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni okanye i-visa yotyalomali eMakedoni?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eMakedoni ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eMakedoni ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni ukusuka eYurophu, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni ukusuka e-Bangladesh, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni ukusuka e-Indonesia, Ukuhlala ngotyalo-mali eMakedoniya ukusuka eSri Lanka, Ukuhlala ngokutyala imali eMakedoni ukusuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMakedoni ukusuka eIndiya kunye nokuhlala kwakhona. ngokutyala imali eMakedoni ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali kwelaseMakedoni
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala imali eMakedoni
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eMakedoni
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle www.mfa.gov.mk
IKhomishini kaRhulumente yokuThintela uRhwaphilizo- globalfooknik
IKhomishini yoKhuselo leLungelo lokuFikelela simahla kwiNkcukacha zaBantu- www.inin.gov.mk
Iarhente yabasebenzi bakarhulumente- www.cigoc.ie.mk
Icandelo loMphathiswa Wezothutho Nonxibelelwano- www.mtc.gov.mk
Iarhente yoPhuhliso noTyalo-mali- www.idi.gov.mk
Umxholo wemivuzo yonke- www.lkaphelata.mk
I-Arhente yePosi- www.apmk
Icandelo loMphathiswa Wezendalo kunye noCwangciso loMzimba- www.yotyo.yau
Icandelo Lolawulo Lothintelo Lwemali www.dpp.gov.mk
IKomishini yoLawulo lwaMandla- www.erc.org.mk
IOfisi yoPhicotho zincwadi zikaRhulumente- www.zr.gov.mk
URhulumente weRiphabhlikhi yaseMakedoni- www.lada.mk
Icandelo loMphathiswa Wezemfundo Nenzululwazi- www.mon.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wezoqoqosho- Uqoqosho.gov.mk
I-Arhente yoLawulo lweNkunzi www.mapas.gov.mk
Ubhaliso olumbindi lweRM- www.zlm.com.mk
Ulawulo lweeMpahla Iindlela zokuziphatha.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wezempilo- www.zdrastvo.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wezokhuselo- www.morm.gov.mk
Iarhente yengqesho-www.zvrr.gov.mk, www.eva.gov.mk
UMongameli weRiphabhlikhi yaseMakedoni- UMongameli.gov.mk
Iarhente yeArhente yeNdawo yokuThengisa izindlu www.katastar.gov.mk
I-Arhente yoFuduko- www.yayok.im.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wenkcubeko- www.kultura.gov.mk
IKomishini yoKhuselo loKhuphiswano- www.kzk.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wezolimo Nemicimbi Yamanzi- www.zlunga.gov.mk
Iarhente yotyalomali lwangaphandle- www.ityamazin.com
Oonobhala beMicimbi yaseYurophu- www.sep.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wezimali- www.delance.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wezabasebenzi Nenkqubo Yoluntu- www.ukuze.gov.mk
IGazethi esemthethweni yeRiphabhlikhi yaseMakedoni- wwwq.ssvesnik.com.mk
Iiofisi, iiarhente kunye nekhomishini Iofisi yeNgeniso yoLuntu- www.ujp.gov.mk
Abaphathiswa Icandelo loMphathiswa Wezangaphakathi- www.ininzile.gov.mk
IPalamente yeRiphabhlikhi yaseMakedoni- www.magro.ro
IZiko lokuThengwa koLuntu- www.ikhekhaba.nkf
Icandelo loMphathiswa Wezoburhulumente Wengingqi- www.ml..gov.mk
Icandelo loMlawuli woKhuseleko lweDatha- www.izlp.gov.mk
Iarhente yoNxibelelwano lwe-Elektroniki- www.iluyiki.mk
I-arhente yokuKhuthaza uPhuhliso lwezoLimo- minyamda.gov.mk
Iinkonzo zikaRhulumente- www.uslugi.gov.mk
Iarhente yeNkxaso yoShishino- www.seenza.gov.mk
Icandelo loMphathiswa Wezobulungisa- www.ubutya.gov.mk
IZiko loLondolozo lweeMveliso- www.mazine.gov.mk
Iarhente yamandla- www.e.gov.mk
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eMakedoni , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eMakedoni